lg g4 intengo nosuku lokukhishwa
none Izindaba Nokubuyekezwa Intengo ye-LG G4 nosuku lokukhishwa
Intengo ye-LG G4 nosuku lokukhishwa
I-LG G4 isanda kumenyezelwa, inyanga isasele unyaka ogcwele ngemuva kokuthi i-G3 ingene esiteji ngo-2014. Akukona lokho kuphela, kodwa ukutholakala okujwayelekile kuzoba ngokushesha nje lapho kuphela uMeyi eSouth Korea, futhi umkhankaso wayo wokwethulwa komhlaba wonke usethelwe ukufaka amazwe afinyelela kwayi-170.
Ngasohlangothini loMbuso, abasolwa abajwayelekile ngegama likaVerizon, i-AT & T, iT-Mobile & Sprint (kanye ne-US Cellular ne-Best Buy) bazobe behlinzeka nge-LG G4 ohlelweni lwentengo yemvumelwano yeminyaka emibili '$ 200, ne inguquko ebushelelezi yesikhumba emuva ingathengisa i- $ 100 eyengeziwe. I-Sprint isivele imemezele ukuthi i-G4 izofika ngoJuni lapho kutholakala khona izinketho zeMetallic Grey neBlack Genuine Leather. Uma ufuna isikhumba esinsundu, iya ku-T-Mobile, ezoba nefoni eqala ku- $ 599.99 isikhathi esithile ngemuva kukaJuni 1, ukwahlulela ngemithetho yayo ye-G4 sweepstakes.
Okwamanje, intengo evuliwe izoba 'kufana ne-G3, 'ngokuya ngabasebenza nge-LG. Lokhu kusho ukuthi inyakatho ye $ 600 ngaphandle kwenkontileka kanye nemixhaso yenkampani yenethiwekhi, okuyinani elilindelekile elincane elivuliwe lama-Smartphones anamhlanje nama-apos. Intengo e-Italy, ngokwesibonelo, enenye ye-elekthronikhi ebiza kakhulu eYurophu, izokhonjwa ku-EUR 699.90, ngokutholakala ngoJuni. Uma sibheka amanani entengo aseJalimane aputshukile, thina & ama-apos sibheka cishe i-EUR 680 lapho, nokuthile okuya ku-EUR 730 yohlobo lwangempela lwesikhumba.
Abakwa-LG bathengise ngokusobala izinhlobo ze-LG G4 njengamadivayisi akuligi efanayo nembangi yayo enkulu ye-Samsung & apos; s i-flagship ye-Galaxy S6 ne-S6 onqenqemeni, ngenkathi ngasikhathi sinye bezifaka kancane. Isibonelo, isisekelo se-LG G4 singu-10 kuye ku-20 euro eshibhile kune-GS6 evuliwe, futhi uhlelo lwangempela lesikhumba luphansi kune-Galaxy S6 onqenqemeni.
Ukwahluka kwesisekelo kwe-LG G4 & apos; kuzothengiswa ku-Ceramic White ngamaphethini we-3D, Metallic Grey, neGolide. Izinhlobonhlobo zesikhumba zizotholakala ngemibala eyisithupha, futhi, kufaka phakathi i-burgundy yesitayela nenhle, kepha i-pastel blue nayo, yezinhlobo ezintsha.
ukukhipha ibhethri le-samsung gear ezemidlalo
I-droid turbo 2 vs s6
I-T-Mobile isilungele ukuphonsa ulayini wamahhala (cishe) kuwo wonke umuntu okokuqala ngqa ngo-2021
Ukuhlolwa kwebhethri kwe-Galaxy Note 20 no-20: isinyathelo esisodwa phambili, izinyathelo ezimbili emuva
Amadili wekhamera we-Amazon Prime Day 2021 ahamba phambili
Abalandeli be-Fortnite bantshontsha isikhumba se-Galaxy kumayunithi wedemo we-Note 9, futhi abakwaSamsung abahlabeki umxhwele
Konke ukukhishwa okusha kweNetflix neHBO Julayi 2019 - ama-movie, uchungechunge lwe-TV nokuqukethwe koqobo
I-Android ekugcineni ikhuluma ngokuba sengozini kwebhodi yokunameka, ngemuva kwe-Apple
I-PhotoMath isebenzisa ikhamera yefoni yakho ukuxazulula izinkinga zezibalo
Kungani amafoni esinda kangaka?
Idethi yokukhishwa kwe-Apple iPad Air 4, intengo, izici nezindaba
Ungayishintsha kanjani noma uyikhubaze kanjani inkinobho ye-Bixby ku-Galaxy S10, S10 Plus naku-S10e